किबोर्डका लेटरहरू सही ठाउँमा छैनन्,सही भर्सन कहिले आउँछ - फेसबुक फण्डा - साप्ताहिक
किबोर्डका लेटरहरू सही ठाउँमा छैनन्,सही भर्सन कहिले आउँछ
सुशील नेपालको वालबाट
- सुशील नेपाल
एक जना ८० वर्षको बूढो डाक्टरकहाँ गएछ र निकै फुर्ती लगाउँदै कुरा गर्न थालेछ ।
बूढो : मेरी २८ वर्षकी बूढी गर्भवती भएकी छे, तपाईंको के भनाइ छ त डाक्टर सा’ब ?
डाक्टर : म एउटा कथा भन्छु है । एकपटक एउटा सिकारी हतारमा बन्दुकको सट्टा छाता बोकेर सिकार खेल्न हिंडेछ । जंगलमा पुगेपछि उसले एउटा बाघ देखेछ र हत्त न पत्त छाता तेस्र्याएछ । ढ्याम्म त्यो बाघ त्यहीं ठहरै भएछ ।
बूढो : यो त असम्भव छ, कुनै अर्को व्यक्तिले बाघलाई बन्दुक हानेको हुनुपर्छ ।
डाक्टर : हो, मेरो भनाइ पनि यति मात्र हो ।
एउटा सहरमा एक प्रसिद्ध चित्रकार बस्थ्यो । उसले एक दिन एउटा सुन्दर चित्र बनाएर सहरको बीच चोकमा राखिदिएछ अनि चित्रको मुनि लेखिदिएछ— जो कसैले यो चित्रमा कतै केही कमी देख्नुभयो भने त्यहाँ निशाना बनाइदिनुहोला ।
जब उसले साँझपख आफूले बनाएको चित्र हेर्‍यो, त्यो चित्र निशानाहरूले गर्दा एकदम नराम्रो भैसकेको थियो, त्यो देखेर चित्रकार साह्रै दु:खी भयो । उसले सोच्नै सकिरहेको थिएन कि अब के गर्ने ? त्यति नै बेला उसको साथी त्यहाँ आइपुगेछ र उसलाइ किन दु:खी भएको भनेर सोधेछ, चित्रकारले पनि पूरै घटना बताइदिएछ । त्यसपछि उसको साथीले सल्लाह दिएछ : भोलि पनि तिमी एउटा सुन्दर चित्र बनाऊ अनि त्यसको मुनि लेख कि ज–जसले यो चित्रमा कमी देख्नुहुन्छ कृपया सच्याइदिनुहोला ।
चित्रकारले साथीले भनेजस्तै गरेछ । साँझमा जब ऊ आफ्नो चित्र लिन गयो तब त्यहाँ कसैले केही कोरेको थिएन, चित्र जस्ताको तस्तै थियो । तब बल्ल उसले यो संसारको रीत बुझेछ । अर्काको कमी औंल्याउन, अरूलाई नीच देखाउन र अरूको निन्दा गर्न सजिलो छ, तर त्यो कमी–कमजोरी हटाउन वा सच्याउन धेरै कठिन छ ।
श्रीमती : सुन्नुहोस् न हजुर, एउटा कुरा भनौं ?
शेरे : भन न पियारी, के कुरा हो र ?
श्रीमती : हजुर रिसाउनु त हुन्न नि ?
शेरे : रिसाउँदिनँ, भन न पियारी ।
श्रीमती : कुट्ने पो हो कि ?
शेरे : कुट्दिनँ.. कुट्दिनँ । भन न के कुरा हो ?
श्रीमती : (डराउँदै) ..म दुई जीउकी अर्थात् प्रेग्नेन्ट छु ।
शेरे : (खुसी हुँदै) यो त खुसीको कुरा हो नि, तर तिमी किन यति डराइरहेकी ?
श्रीमती : कलेज टाइममा मैले यही कुरा बुवालाई भन्दा धेरै गाली अनि कुटाइ खाएकी थिएँ, त्यसैले नि हजुर !
एक दानी व्यक्तिको दुर्घटना भयो । उसलाई अत्यन्तै कञ्जुस शेरेले आफ्नो रगत दिएर बचायो । यसबाट खुसी हुँदै दानी व्यक्तिले शेरेलाई एउटा चम्चमाउँदो कार उपहार दियो ।
उक्त दानी मानिसलाई फेरि रगतको आवश्यकता परेछ । फेरि पनि शेरे रगत दिन अघि सरेछ । यसपालि चाहिं दानी व्यक्तिले शेरेलाई एक रुपियाँको चकलेट उपहार दिएछ ।
शेरेले आक्रोशित हुँदै दानीसँग भनेछ : कार किन नदिएको ?
दानी व्यक्ति : यत्रो दिन्छु तँलाई कार, जति दान गरें–गरें । अब त मेरो शरीरमा पनि तेरै रगत बगिरहेको छ ।
शेरे घर पुग्नेबित्तिकै बूढीले आत्तिँदै भनिछ : धन्न तपाईं राम्रैसँग घर आइपुग्नुभएछ । मलाई कम्ता पीर लाग्या हो र ?
शेरे : (अचम्म मान्दै) किन ? के भा’ छ र मलाई ? केही त भा’ छैन ।
बूढी : बाहिर टोलमा मानिसहरू ‘कुनचाहि जँड्याहा मर्न नसकेको कात्तिके कुकुर रक्सी धोकेर त्याँ गुको ढलभित्र लडिराखेको छ भन्दै हल्ला गरिरहेका थिए नि त, त्यसैले ।
शेरे सेन्टिफ्ल्याट ।
शेरेले माइक्रोसफ्ट कम्पनीको मालिक बिल गेट्सलाई चिठी लेखेछ ।
सर, मलाई तपार्इंसँग केही प्रश्न सोध्नुपर्नेछ :
१. किबोर्डका लेटरहरू सही ठाउँमा छैनन्, किबोर्डको सही भर्सन कहिले आउँछ ?
२. विन्डोज्मा स्टार्टको बटन छ, तर स्टपको बटन छैन, किन ?
३. हामी एमएस वर्ड प्रयोग गर्छौं, मिस्टर वर्ड कहिले आउँछ ?
४. किबोर्डमा एनी कीको बटन छैन, तैपनि किन कम्प्युटरले एनी की थिच्नु भन्छ ?
अब मेरो अन्तिम प्रश्न
५. तपाईंको नाम गेट्स हो, तर किन तपाईं विन्डोज बनाउनुहुन्छ ?
तपाईंको कम्प्युटर प्रयोगकर्ता ।
कुरा बुझ्नु भो त भाद्र ४, २०७५
रक्सीमा बाहेक कुनै चिजमा भरोसा रहेन श्रावण १९, २०७५
बिजुली बत्ती बाल्ने भनेकै लाल्टिन खोज्ने बेलामा मात्र हो असार २३, २०७५
खडानन्दका हस्यौलीहरु वैशाख १५, २०७५
मोबाइलको सेटिङमा एयरप्लेन मोड लगा’को साइकल मोड देखाउँछ चैत्र १०, २०७४